८ सय ४८ म्यानपावरलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनुमती (हेर्नुहोस् सुचिसहित) - Lokpath Lokpath
१९ भाद्र २०७६, बिहीबार ११:४६
८ सय ४८ म्यानपावरलाई मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने अनुमती (हेर्नुहोस् सुचिसहित)
प्रकाशित मिति : १९ भाद्र २०७६, बिहीबार ११:४६
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन इजाजतपत्रवाला संस्थाको धरौटी वृद्धिको म्याद समाप्त भएको छ । यससँगै वैदेशिक रोजगार विभाग मार्फत नयाँ बढेको धरौटी अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनको इजाजत पाउने म्यानपावरहरुको सूची प्राप्त भएको छ ।
म्यानपावरहरुको सूची प्राप्त भएसंगै देशमा ८ सय ४८ वटा मात्रै म्यानपावर कम्पनी रहने भएका छन् । १५ सयभन्दा बढी म्यानपावर दर्ता भएकामा अब ८ सय ४८ म्यानपावर कम्पनीले मात्रै सरकारले अनुमति दिएको गन्तव्य देशमा कामदार पठाउन पाउने छन् । सरकारले धरौटी रकम बुझाउन दिएको अन्तिम म्याद बुधबारसम्म ८ सय ४८ म्यानपावरले न्यूनतम धरौटी जम्मा गरेका हुन् ।
म्यानपावर संस्थाहरुको नगद धरौटीको ‘भेरिफाई’ गर्ने कार्य भोली मात्रै हुनेछ । २ म्यानपावरले ६ करोड, ३ म्यानपावरले ४ करोड र ८४३ कम्पनीले २ करोड धरौटी बुझाएका छन् ।
यसअनुसार भदौ १७ भित्र धरौटी रकम जम्मा गर्न म्यानपावार कम्पनीलाई समय दिइएको थियो ।
धरौटी जम्मा गर्ने म्यानपावरको सूची :
काठमाडौं । नेपाली युवाका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियामा रोजगारीको कोटा वृद्धि
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले विभिन्न पदका लागि कर्मचारी माग गरेको छ
डिभी जस्तै कामदार भिसा खुलाउँदै अमेरिका, यस्तो छ जाने प्रक्रिया (विवरणसहित)
एजेन्सी । अक्सर धेरै नेपालीहरुको ‘ड्रिम ल्यान्ड’ हो अमेरिका । स्टुडेन्ट, भिजिट, बिजनेस
सरकारी जागिरको अवसर ! लोकसेवा आयोगले अधिकृत माग्यो
काठमाडौँ । के तपाईँ लोकसेवाको तयारीमा हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने लोकसेवा आयोगले